अब भाइरस सङ्क्रमणको तेस्रो लहर फैलिन सक्ने सम्भावना कति छ ? चलिदैछ यस्तो कदम – Sapana Sanjal
June 29, 2021 144
Sapana Sanjal : भाइरस सङ्क्रमणको तेस्रो लहर फैलिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर बाँकेका अस्पतालले पूर्वतयारीमा जुटेका छन् । बाँकेका मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशसहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समेत बिरामी उपचारका लागि यहाँ आउने भएकाले अहिलेदेखि नै आवश्यक पूर्वतयारी शुरु गरिएको भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, तेस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण फैलिनु अगावै आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा अस्पताल जुटेको छ ।
Prevकतार प्रहरीमा भर्ना हुन चाहने नेपालीका लागि खुशीको खबर, कती हुन्छ तलब ?
Nextगायक राजेश पायल राई को अगालोमा बेरिने को हुन् यी युवती ? के उनीहरु प्रेममा छन् ? बिहेदेखि सम्बन्धको बारेमा यसरी खुलाए राजेश , हेनुहोस